Okunye Izesekeli Factory - China Okunye Izesekeli Abakhiqizi, abahlinzeki
Amabhendi Wokumelana Isethi Yesithathu
Izinto zekhwalithi ephezulu:
Ibhendi lethu lokumelana lenziwe nge-polyester kanye ne-latex silk.Ine-elasticity ephezulu, izici ezingacindezeli nezinganqamuki.
Usayizi we-M unesilinganiso esingu-64cm, ububanzi obungu-8cm, kanye nokumelana kwamakhilogremu angama-60,90,120.
Usayizi we-L unesilinganiso esingu-74cm, ububanzi obungu-8cm, kanye nokumelana kwamakhilogremu angama-60,90,120.
Usayizi we-XL unesilinganiso esingu-84cm, ububanzi obungu-8cm, kanye nokumelana kwamakhilogremu angama-60,90,120.
Imininingwane Esheshayo Indawo Yomsuka China Igama lomkhiqizo ENGINE Model Model Gloves Material Polyester Usage Gym, Weightlifting Exercise People esebenzayo People Unisex Activation Gym & Training Name Product Kwenziwe ngentando Gymves Gloves Service ODM OEM Service Sample Availabe Samples Packaging & Delivery Selling Units Into eyodwa iphakethe elilodwa ...
I-Anti Burst & Slip Ukuzivocavoca Ibhola: Yakhiwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme ze-PVC, amabhola wokuzivocavoca aphakeme kakhulu emakethe. Ibhola lethu lokuqina lokuqina lokuzivocavoca lingakwazi ukumelana nokuzivocavoca okunzima kakhulu kuze kufike kuma-2000 lbs - konke ngenkathi kukuvimbela ukuthi ushiye.
Ukusetshenziswa Okuhlukahlukene: Amabhola wokulinganisa amahle kakhulu wokuzivocavoca, i-yoga, ama-pilates, nokwelula ekhaya, ejimini, noma ehhovisi! Futhi kuhle ukukhululeka kwezinhlungu emuva, ngesikhathi sokukhulelwa, kanye nokwenza ngcono ukuma kwakho namandla ayisisekelo.
Ikhwalithi ephezulu yekhwalithi kanye ne-Anti-Slip: Ikhwalithi yobungcweti enezinto ze-PVC ezingezona ezinobuthi, ngaphandle kwe-BPA nezinsimbi ezisindayo
Ukusetshenziswa Okuhlukahlukene: Hhayi kuphela okuhle kuma-pilates, i-yoga, ukuqeqeshwa emuva nasesiswini nokuzivocavoca ukukhulelwa noma amakhulukhulu wokuzivocavoca umzimba, kepha futhi kungasetshenziswa njengesihlalo sebhola lehhovisi ukwenza ngcono ukuma kwakho nokuqeda izinhlungu emuva.
Kutholakala ngosayizi aba-5.
Hokudala Yyethu Pkonke With Ease: Uzozethemba, ube nesitayela futhi uvikeleke ngamasokisi wethu we-anti-skid, non-slip ballet-inspired. Zizwe ukhululekile ukuhambisa nokusabalalisa izinzwane zakho ngokwemvelo ngamasokisi ethu agcwele izinzwane ngomklamo omuhle. Uma ufuna amasokisi afanele i-yoga, ama-pilates, i-barre, i-ballet, i-bikram, i-gym noma umdanso, ungamisa usesho.
Khulisa Balance futhi Subumnene: Amasokisi ethu e-barre nawo mahle uma wenza i-yoga ezindaweni ezishelelayo njengaphansi kwamathayela noma okhaphethi. Amasokisi ezemidlalo endabuko angaba bushelelezi kakhulu phansi kokhuni, phansi nasejimini yePilates. Idizayinelwe ukuphepha kwakho engqondweni, amasokisi angasheleli ahlinzeka ngokubambelela okuningi nokudonsa ezindaweni ezishelelayo.
Niqhwa Design: Uzothanda amasokisi wakho wesitayela se-ballet wamakilasi wesitudiyo. Leli sokisi labesifazane eliphansi elisikiwe linezintambo nokunwebeka kokufaka isitayela ekusebenzeni kwakho. Indwangu kakotini ehlanganisiwe kanye nokunyathela isithende kukhulisa ukusebenza kokutholakala kwesitudiyo okuphelele. Ngokwengeziwe, uzobona iphethini yobuhlanga enhle ezansi kwamasokisi akho e-ballet.
Comfort Izinto: Uma uzonda ukuzizwa kwamasokisi ezinzwane, leli yipara elifanele wena! Kuyaduduza futhi kuyasekela, kuvumela izinyawo zakho ukuthi ziphefumule, ngenxa yokusikwa okuphezulu kwamasokisi ethu; ipheya lethu elisezingeni eliphansi linezintambo ezihamba ngaphezu konyawo lwakho ukuzibamba ngokuphepha endaweni. Manje usungachitha isikhathi esiningi ugxile ekuvivinyeni umzimba wakho nesikhathi esincane sokukhathazeka ngokuhlala umile.
I-Super soft & Absorbent: I-Yogis ihlokoma ngokuthi ithayela lethu le-100% microfiber lithambile kanjani, kepha limunca kakhulu, linikeza indawo eyomile eyengeziwe, engasheleli ephelele kuma-yogis awo wonke amava
Ukunakekelwa Okuhlala Njalo Nokulula: Ukuwashwa komshini nomoya owomile ngokwehlukana kuqala, khona-ke kulungile ukuphonsa phakathi nayo yonke impahla yakho yokuwasha.
Izinto Ezintsha ze-Microfiber: Akuwona wonke amathawula we-yoga ane-Dual-Grip enamacala amabili. Inhlanganisela yokumboza ye-Microfiber ne-Silicone ingukuthuthuka kwakamuva kwetheknoloji kuthawula elilodwa lendabuko le-microfiber yoga. Ukuthungwa okuklanywe ngokukhethekile kwe "grip-grid" kuqinisekisa ukuzinza futhi kukusize ukuthi ubambe ukuma isikhathi eside futhi uqinise.Ithawula leYoga lenziwa nge-microfiber encipha kakhulu ethambile, ethambile nomswakama ecwilisa umswakama nezithukuthuku njengesiponji esikhulu.
12 Imibala Kuyatholakala: Okuphinki, Okuphephuli, Okuluhlaza okwesibhakabhaka, okuluhlaza okwesibhakabhaka, okusawolintshi, okubomvu kwewayini, okuPhephuli okukhanyayo, okuBomvu ngokuBomvu, okuluhlaza okwesibhakabhaka, Okumpunga, Okuphuzi nokumnyama.
Umkhiqizo we-Yoga okhethekile: Ukuba ngumkhiqizi womkhiqizo weyoga iminyaka eyi-9, besilokhu siqhubeka nokuthola iplanethi yethu ngezinto ezinhle kakhulu zokuqinisekisa ukwaneliseka okuphelele kwamakhasimende ethu.
SHINTSHA ukuphila kwakho: Ukubhucungwa emuva, ibhalansi engcono, ukuguquguquka okuthe xaxa namandla ayisisekelo kungezinye zezinzuzo eziningi ezinenzuzo zesondo. Dala i-asana ejulile - umkhuba we-yoga nokuma kwayo okuqinisayo.
Ikhwalithi ye-Premium ne-Eco-friendly: Isethi yethu yesondo le-yoga yenziwe nge-TPE eco-friendly esikhundleni se-PVC empofu, eqinile, ezinzile, ephephile, engenaphunga futhi ethokomele. Umnyombo wangaphakathi we-ABS unamandla amakhulu futhi uzosekela isisindo esifinyelela kuma-220 lbs.
Ukunethezeka nokuphepha: Ingcono kunemikhiqizo eminingi kuzo zombili ikhwalithi nobukhulu, iYoga Wheel yethu ifaka okokunamathisela okujiyile okutholakalayo, okuvikela izintende zezandla, izinyawo, nokubuyela emuva ngenkathi uzivocavoca umzimba, okunikeza umuzwa okhululekile futhi ophephile. Okuningi kuze kube seqophelweni, ngeke kuguquguquke ngaphansi kwesisindo sakho.
Ukumelana Nomjuluko: Kukhululekile ukujuluka nokungcola, ngenxa yokugqobhoza kwayo okungaphezulu kwe-6mm, ungasebenzisa isondo lakho le-yoga elibekiwe ngezikhathi zonke zokuzivocavoca nge-yoga! Ngenxa yokumelana kwayo nezithukuthuku, isondo lakho le-yoga ngeke ligcine lawo maphunga amabi omzimba.
Izinto eziphezulu zekhwalithi:
Intambo yensimbi yokweqa intambo yenziwa nge-PP, i-EVA nocingo lwensimbi.
Usayizi wesibambo ngu-3.5cm * 15.5cm.
Usayizi wentambo yokweqa ejwayelekile ngu-4.4mm * 2.8M, kanti inguqulo ethuthukisiwe ingu-5.0mm * 3.0M.
Le ntambo eyeqayo inemibala emine: omnyama omsulwa, obomvu nomnyama, oluhlaza nokumnyama, nohlaza okwesibhakabhaka nomnyama. Intambo ejwayelekile yokweqa isisindo esingu-160g, kanti inguqulo ethuthukisiwe ingu-180g.
Amabhendi Okumelana Nesethi Esihlanu
Imininingwane Esheshayo Indawo Yomsuka Jiangsu, China Igama Lombhalo ENGINE Amabhendi wokumelana Nenombolo Yemodeli Usayizi 600 * 50 * 0.3 / 0.5 / 0.7 / 0.9 / 1.1 mm, 150 cm * 15 cm * 0.35mm Igama lomkhiqizo: I-Yoga Exercise Tension Bands Resistance Bands Material 100% I-Natural Latex Umbala ophuzi, oluhlaza okwesibhakabhaka, obomvu, omnyama, oluhlaza okotshani, onsomi, owolintshi, oluhlaza noma owenziwe ngokwezifiso we-MOQ 1 PC Umsebenzi we-Yoga / Gym Ukusetshenziswa Kokuzivocavoca Kwesimo Sokuqina Kwangaphakathi / i-yoga / amandla Isici siguquguquka, ukuqina okuhle kwe-OEM Isampuli Yesampula ye-Availabe Packaging ...